Tonga Indray Ny Hetsika Hay Festival Dhaka! · Global Voices teny Malagasy
Tonga Indray Ny Hetsika Hay Festival Dhaka!	Voadika ny 09 Novambra 2012 2:56 GMT
Zarao: Ao Bangladesh, nanjary malaza ny fampiasana teny Anglisy amin'ny literatiora. Tsy hihanoka fotsiny amin'ny fanoratana amin'ny teny Bangla, mpanoratra maro no nanapa-kevitra hanoratra amin'ny teny Anglisy. Zava-baovao malaza ao Bangladesh izany. Hihaona indray ireo mpanoratra amin'ny teny Anglisy ao Dhaka amin'ilay hetsika andiany faharoa Hay Festival. Amin'ny 15-17 Novambra 2012 no hotontosaina ny fetibe izay atao ao amin'ny tokotany manatantara ao amin'ny Akademia Bangla, Dhaka. Antenaina fa mandritra ity hetsika ity, hiroborobo eo amin'ny fiarahamonin'ny literatiora manerantany ireo mpanoratra vaovao amin'ny teny Anglisy ao Bangladesh.
Afisy lehibe ny hetsika Hay Festival Dhaka.
Sadaf Saaz Siddiqi, anisan'ny mpikarakara ny Hay Festival Dhaka sady mpanao tononkalo, nilazalaza amomba ny hetsika:
Amin'ny maha-hetsika isan-taona azy, izay antenainay fa hizotra tsara hatrany, hafatra tsara ho an'ny fiarahamonina mpanoratra amin'ny teny Anglisy ny Hay Festival Dhaka mba hiroboka tanteraka amin'ny sehatry ny literatiora manerantany. Te-hampiroborobo ny literatiora Bengali any ivelany izahay, satria ampahany kely amin'ny haisoratra midadasika Bengali no mba nadika tamin'ny teny hafa sy nampahafantarina tany ivelany (kanefa raha ampitahaina ohatra, anarana malaza sy mahazatra manerantany ireo mpanoratra Amerikana-Tatsimo). Manantena izahay fa handrisika ireo mpamoaka lahatsoratra handray anjara amin'ny tetikasa fandikàna ny hetsika Hay festival.
Tahmima Anam, mpanoratra ny ‘A Golden Age (Taona Volamena)‘, sy ny ‘The Good Muslim (Miozolmana Mahafinaritra)‘, nilaza hoe:
Sehatra iray lehibe ahafahana miresadresaka amin'ireo mpanoratra matihanina Britanika sy Bangladeshy ny hetsika Hay Festival; Mino aho fa hanokatra tontolon'ny haisoratra vaovao ao Bangladesh ity hetsika ity ka hitondrantsika ny somby majikan'ny Hay ao Dhaka.
Indreto sary sasany nandritra ny andro voalohany tamin'ny hetsika Hay Festival Dhaka tamin'ny taon-dasa.
Sarin'ny hetsika Hay Festival Dhaka 2011. Sary tao amin'ny pejy Facebook, Hay Festival Dhaka.
Fetin'ny literatiora maharitra telo andro ity fetibe amin'ity taona ity izay ahitana adihevitra amin'ny fiteny roa sy hetsika hafa mampisongadina ireo mpanoratra fanta-daza manerantany tahaka an'i Vikram Seth, Syed Shamsul Haq, Nandita Das, Philip Hensher, Kamila Shamsie, Basharat Peer, Zafar Iqbal, Mohammed Hanif, Gillian Clarke, Kaiser Haq, Sharbari Ahmed, Farah Ghuznavi, Shaheen Akhtar, Selina Hussein, Shehan Karunatilaka, Mahmud Rahman, Anis Ahmed, Anisul Hoque, Audity Falguni, Tahmima Anam sy ny sisa hafa.
Tao amina tanàna kely tao Wales Hay-on Wye, ary manodidina ny latabatra an-dakozia no natomboka voalohany ny Hay festival tamin'ny taona 1987, ary nanjary iray amin'ireo fetiben'ny literatiora lehibe indrindra manerantany izy ankehitriny, miorina ao ambanivohitra Galoazy ao Brecon Beacons. Nomen'i Bill Clinton anarana malaza hoe ‘the Woodstock of the mind’, fotoana hihaonan'ireo mpanoratra manerana izao tontolo izao ny hetsika Hay nandritra ny 25 taona mba hiresahana sy hizarana tantara. Tamin'ity taona ity no nankalazana ny faha-25 taona nitsingerenan'ny hetsika Hay Festival ary 10-andro fankalazana no nanamarihana izany izay natao tamin'ny volana Jiona tao Hay-on Wye tao Angletera.
Vakio amin'ny teny English, Español, Català, Italiano, polski, বাংলা
Fifandraisana iraisam-pirenenaFitenyHaisoratraMediam-bahoakaZavakanto & Kolontsaina